Haimen Xinrong Electric Co., Ltd hwagadzwa muna 1999, imwe nyanzvi mugadziri nyanzvi pakutsvakurudza kukura uye kugadzirwa ovheni rambi pedhi . Tiri riri Liuhao Town, Haimen City, pedyo Shanghai chengarava, pamwe nyore chokufambisa kuwana. Zvose zvinhu zvedu zvinoenderana dzakawanda unhu mitemo uye vanoongwa zvikuru pamisika siyana munyika yose.
We zvinopa dzakasiyana muchoto rambi pedhi, dzedu muchoto girobhu racho pedhi vainyanyoshandisa nokuda gasi muchoto, yakachena hwemvura muchoto, hwemvura muchoto, muchoto chiedza Fixtures. Products Anonyanyowanika aivigirwa kuItari, Turkey, kuMiddle East uye dzimwe nyika uye kumatunhu pamwe yokuisvonaka yedu, zvaunoda mutengo, nomwoyo wose nokuti zvipfuwo uye vatorwa vatengi!
tsvimbo dzose kambani yedu anoshanda ose mutengi pamusoro nyika misimboti: zvinodziya basa iri risati; unhu kutonga ari mujinga kukura; mukurumbira ndiko mujinga yokupona. Kana uchifarira zvinhu zvedu, unogona nesu chero nguva uye tichaita vanopindura iwe nokukurumidza sezvinobvira.
Kana uchifarira chero zvinhu zvedu kana uchida nyaya customized murayiro, tapota inzwa wakasununguka nesu. Tiri kutarisira kuti pave abudirire mabhizimisi ukama nemakasitoma itsva kubva pasi rose.